Publiée par mpanarabaovao — Le 31 mai 2017
Nahagaga sy nahatalanjona ra naheno ny zavatra nitranga tety amin'ny Forello Tanjombato, mpiasa lehilahy iray miasa amin'ito zone franche itony no namono ny vadiny, nihoson-drà tanteraka ramatoa no sady mitoe-jaza ihany koa. Rehefa avy novonoiny ilay vadiny dia lasa izy nody nisolo akanjo, satria feno rà. Ilay vadiny kosa tamin'io fotoana io mbola tsy maty tsara fa mbola afaka niteny, ary nilaza tamin'izay olona saika hanavotra azy teo fa ny vadiny ihany no namono azy. Tonga dia nampandré ny zandary ny fokonolona nanatrika teo ka noraisim-potsiny ity farany. Raha ny fantatra dia toa leo ilay vadiny ity lehilahy ary te hiaraka amin'ilay sipany, dia izay no antony namonoany ilay tena vadiny. Tsy aleo ve misaraka tsy misy maratra??
Gravy koa ilay vaovao Tv tsy miankina ny zoma halina= sinoa 5 ( l...